Banka Dagaari Sida Loogujebiyey Gunta Habar-majeerteen Daawo! – Codka Qaranka Tanadland
Banka Dagaari Sida Loogujebiyey Gunta Habar-majeerteen Daawo!
Waxaan ka xumahay in wiilkii Habar-majeerteen oo dhaawaca reer tolkiis intuu ka damqaday sida loola dhaqmay filimka ka soo duubay, oo markaas parta Youtube – ka uu ku leeyahay soo geliyey. Inuu markuu warbaahinta Tanadland ku arkay filimka uu ka saaray Youtube – ka. Run ahaantii hadaan tuhun ka qabo in ninka filimka iska lihi uu sidaas diciif u yahay anigaaba koobi ka samaysanlahaa oo Youtube – ka si aan ahayn u isticmaali lahaa. Laakiin nasiib wanaag (Daahir Calasow) nin la yiraahdo oo ehelu-qayr ah ayaa filim kaas taariikhiga ah koobiyeeyey. Aniguna hada koobi ayaan ka samaystay.
Filimka Koobiga ah ee (Daahir Calasow)
Filimka Dhaawaca beesha Hartiga oo inta meel lagu daaweeyo loo waayey xamar lagu qubay, oo uu inan gumeedkii Habar-majeerteen ee soo duubay uu Youtube – ka ka saaray. Habar-majeerteen alla nimanku jilicsanaa oo hal’adyg la’aa Youtube – kiina hadaa laga cayrshey. Walee inaad naagtii Habar-majeerteen ee uu caloojileecu diley aad ku samcantihiin.
Sidaad badankiinu la socotaan dabayaaqadii sanadkii hore, taariikhdu markii ay ahayd (22/11/2015) waxaa xaafadda garsoor ee magaalada Gaalkacyo ka dhacay dagaal lagu shirqoolay agoonta beesha Habar-majeerteen. Shirqoolkaas oo ay abaabushey beesha (Muumin Aadan). Xaafadda garsoor waxaa ka socdey dayactir lagu sameynayey mid ka mid ah wadooyinka xaafadda Garsoor. Iyadoo ay hawshii dayactirka wadadu ay socoto ayaa beesha (MA) waxay keentay niman Habar-majeerteen ah oo u qorshuhu ahaa in meesha lagu laayo. Nimankii Habar-majeerteen markii ay meeshii yimaadeen ayaa nimankii la weeraray oo la laayey.
Nimanka dhebayacada ah ee lagu shirqoolay in lagu laayo xaafadda garsoor, markii la weeraray waxaa la joogey ciidan reer Tanadland ah oo markii ay xabaddu ku bilaabatay nimanka la shirqoolay doc uga bayray. Falkaas waxaa wada fuliyey nimankii shirqoolka isla dhigay oo ah beelaha (Muumin Aadan) iyo (Sacad). Maleeshiyada Habar-majeerteen markii ragoodii la xasuuqay, ayaa hadana intaas loogagama harin ee waxaa la duqeeyey oo madaafiic roobka loogaga dhigay galbeedka xaafadda Isaraac. Duqayntaas waxaa beesha Habar-majeerteen loogu geystey qasaaro lixaad leh oo isugujira dhimasho iyo bur-bur hantiyeed. Markaas ayey waxay damceen inay weerar soo qaadaan oo ay xaafadda garsoor ka weeraraan beesha (Sacad), iyaga oo beesha (MA) ay ka codsaday in loo ogolaado marin ay beesha (Sacad) ka weeraraan. Arintaas waa lagu qoslay oo waxaa laguyiri “Hadaad tihiin niman aarsankara oo dagaal diyaar u ah labo aag oo ah dhanka bariga iyo galbeedka magaalada baad ka dagaalgelilahaydeen ee ordaya nac-nacda nagala taga”.
Arinta kale oo muhiimka ah waxa weeye maalinta la shirqoolay oo lagu xasuuqay besha Habar-majeerteen rageeda xaafadda garsoor, ciidamada beesha (Sacad) waxaa lagu soo dhaweeyey xaafadda Garsoor oo ay ka duqeeyeen galbeedka xaafadda Israac oo aad loo burburiyey maalintaas. Shacabka beesha Habar-majeerteena laga qixiyey markii aad loo duqeeyey. Intaasi markii ay dhacday oo xaafadda Israac badankeeda laga qaxay. Dagaalkii qafladda ahaa ee dhebayacada rageeda lagu xasuuqay xaafadda Israacna lagu bur-buriyey. Beesha Habar-majeerteen waxaa loo geystey jab lixaad leh, 16 nin oo maleeshiyadooda ahna waa la xasuuqay. Dad shacab ah oo 32 qof ahna waxaa lagu laayey hoobiyeyaashii roobka loogadhigay galbeedka xaafadda Israac.
Intaasi markii ay dhacday, beesha Habar-majeerteen qawsaar harti ah iyo waxay rag helikartey ayey isugugeysey banka Dagaari iyo magaalada Gaalkacyo inta u dhexeysa. Beesha Habar-majeerteen waxay maleeshiyadoodu ay halkaas ka samaysteen fariisin. Waxayna meeshaas banka ah ay ku urursanayeen rag, hub iyo saanad itii u dhexaysey maalintii ragooda la xasuuqay oo shacabkooda laga qixiyey xaafadda Israac, oo ay taariikhdu ahayd (22/11/2015) ilaa iyo (03/12/2015).
Beelaha reer Tanadland ee gobalka mudug ee ree (Ugaas Cismaan) iyo (Maalismoge), waxaa ka dhexeeya beesha (Sacad) isbahaysi ciidan iyo mid siyaasadeed oo ku wajahan beesha Habar-majeerteen iyo xulufadooda. Isbahaysi gaasina wuxuu bilowday dagaalkii labada maalmood ee dhacay (01/09/2011) iyo (02/09/2011). Dagaalkaas maxaysatada Hartiga markii la jebiyey hubkii laga furtay (Sacad) hub muhiim ah oo u hal taangi ku jiro ayaa la siiyey. Marka maleeshiyada Habar-majeerteen iyo midiidinkood la soo dhoobay banka dagaari in la jebiyo oo hubka laga furto beesha reer (Ugaas Cismaan) ka koonfureed waxay u aragtay fursad qaali ah.
Mideeda kale, ujeedada beesha Habar-majeerteen ay maleeshiyadeeda u keentay banka dagaari marna maysan ahayn inay aarsadaan oo ay duulaan qaadaan. Ee muhiimadda ugu muhiimsani waxay ahayd inay ku dhiirigeliyaan shacabkooda ka qaxay galbeedka xaafadda Israac inay dib ugu soo noqdaan magaalada Gaalkacyo. Mudo 10 maalmood ah markay maxaysatada Habar-majeerteen ay ku silicsanaayeen banka suudiga ah, ee aan lahayn wax dhir ah. Ayaa beesha (Sacad) waxay u maleegtey beesha Habar-majeerteen shirqool ka weyn midkii horay loogu xasuuqay. Beesha (Sacad) waxay u soo jeedisey beesha Habar-majeerteen in ciidamada isku horfadhiya banka Dagaari iyo magaalada Gaalkacyo dhexdooda la kala qaado, oo wixii dhacay laga heshiiyo. Maadaama beesha Habar-majeerteen aysan marna ku talagalsanayn inay weerar qaado oo ay ka dabaaqdo xasuuqii loogeystey. Beesha Habar-majeerteen heshiiskaa waxay u soo dhaweysey si la yaab leh. Waxayna u aragtay fursadda keliya ee u suurogelinkarta shacabkeeda magaalada laga barakiciyey inay dib magaalada ugu soo laabtaan.
Maalintii heshiiska beesha Habar-majeerteen lagu qatalay uu dhacay oo ay taariikhdu ahayd (02/12/2015) maalintii ku xigtey, Amin aroor hore ah ciidamada geesiyiinta ah ee beesha (Sacad) waxay qaadeen duulaan mudo la qorsheynayey oo loogu talogalay in looga takhaluso gunta Habar-majeerteen, oo inay faan qiyaali ah iskumaaweeliyaan mooyaane aan weligoodba rag iska dhicin, kulay ku tahay hal goob ah oo keliya.
Aragtida Caamka Ah Intaanu Dhicin Dagaalkii Banka Dagaari :-
Iyadoo ay beesha Habar-majeerteen ay weligoodb ahaayeen gun taag daran oo aan weligood goob dagaal aan rag iska caabin, ayaa hadana sabenadaan danbe waxaa la soo gudsboonaadey guuldarooyin isdabajoog ah. Gunta habar-majeerteen iyo adoomada midiidinka u ah ee ay ku adeegato waxaan filahayaa inaad ogsoontihiin dagaalkii labada maalmood ee sida xun loogu jebiyey, oo dhacay taariikhdu markii ay ahayd (01/09/2011) iyo (02/09/2011). Dagaalkaas walow ay beelaha reer (Ugaas Cismaan) ka koon fureed ay u dhamaayeen, oo beesha (Idiris Cismaan “Fiqi-Ismaaciil”) ay qayb muhiim ah ka qaadatay. Hadana Beelaha reer (Ugaas Cismaan) ka koonfureed aalaa marka ay dagaalkaas ka hadlahayaan waxay ku faanaan, “War habar-majeerteen niman ay labo maalmood celinkaraan maahin iyaguna waa ay ogyihiin ee waa’ay na qataleen”.
Waxaana ay rumaysanyihiin in dagaalku uu labo maalmood qaato uu u sabab ahaa (Cali Ugaas). Oo Aysan suurtagal ahayn in xataa beesha (Muumin Aadan) oo keliya aysan beesha Habar-majeerteen iyo xaabada ay wadato aysan maalin gelinkeed aysan ishor taagikarin. Arintaas waxaa daliil u ah in maalintii ugu horaysey ee dagaalka in markii ay shacabka beesh reer (Ugaas Cismaan) ka koonfureed ay dagaalka ku jebiyeen maxaysatada beesha Habar-majeerteen. In ciidan lixaad leh oo beesha reer (Ugaas Cismaanka) ka koonfureed ah la soo dhoobay galabnimadii maalintaas inta u dhexaysa magaalada (Halabooqad) iyo Gaalkacyo. Ciidamadaasna hadafkooda kowaad wuxuu ahaa inay habeenimada dagaal mir ah ku qaadaan xaafada Israac oo fariisin u ahayd maleeshiyada Habar-majeerteen, ayna isla habeenimada ay qabsadaan friisimada maleeshiyadooda iyo galbeedka xaafadda Israac.
Beesha Habar-majeerteen markii ay ka warheshay in wadada kaliya ee sahayda iyo taakulayntu ay uga imaanlahayd in la qabsaday oo ay godoon ku jiraan. Ayaa waxaa dhacday in beesha Habar- majeerteen odayaashhoda iyo siyaasiyiintoodu ay la hadleen (Cali Ugaas) ayna ka baryeen in hadii uu dagaalka joojiyo, oo maalinta xigta aan maleeshiyadooda la weerarin, in beesha Habar-majeerteen ay diyaar u tahay inay aqbasho wax kasta oo beelaha reer (Ugaas Cimaan) ka koonfureed ay rabaan. Ninka odayaasha beeshiisa la hadalsiiyey (Cali Ugaas) oo inta balanta la galay ku balanfurayna wuxuu ahaa odaygii iinta badnaa oo indhaha iyo faraha la’aa ee ay “faroole” lahaayeen. Arintaasi waxay sababtay in duulaankii habeenkaas la qaadilahaa la baajiyo ciidankiina dib loo celiyo. Laakiin beesha habar-majeerteen oo u qasadkoodu ahaa inay si ay uga dabaaqaan jabkii loo geystey maalintii hore ee dagaalka ay adeegsadaan xeelad balanfuryo ah. Waxay weerar ku qaadeen subixii danbe fariisimada Xaafadda (Garsoor) ee ciidamada geesiyiinta ah ee beelaha reer (Ugaas Cismaan) ka koonfureed. Dagaalkii maalintii danbe iyadoo dagaalka si xun loogu jebiyey maxaysatada beesha Habar-majeerteen iyo adoomadooda’ oo hubkii ay wateen intii badnayd waxna laga gubey waxana laga qabsaday. Ayaa labo jaho waxaa dagaalka ka soo galay ciidamadii uu (Cali Ugaas) magaalada (Halabooqad) uu ka celiyey. Ciidamadaasi markay dagaalka soo galeen ciidamada cadowga mudo 20 daqiiqo ah ayaa waxaa laga dhigay wax firxaday iyo wax baqtigooda haada loo waray.
Majiro nin Habar-majeerteen ah oo aaminsan ha yaraado ama ha badnaadee in ciidan reer Tanadland ah oo duulaan ah in jaaha la saari karoama la caabiyi karo. Nin reer Tanadland ahna isaga bal warkiis daah. Anigu dagaaladii 1980 maadkii ka dhacay gobalka mudug waa an ka soo qayb qaatay, Duulaankii ugu danbeeyey oo nimanka aynu hada xulufada nahay saldhigooda lagu qabtayna, maalintaas goobjoog baan u ahaa. Dagaaladii 1990 meeyadii ka dhacay koonfurta soomaaliyana waa an ka soo qayb qaatay. Sida aad ogsoontihiina beesha (Sacad) qibraddooda tan iyo intii ka danbeysey 1990 -kii iyo sanadihii 1980 maadkii faraq weyn baa u dhexeeya. Oo nimanku maaha niman ay naagaha Habar-majeerteen iyo xaabada ay wataani ay u babac dhigikaraan.
Dagaalkii Maleeshiyada Beesha Habar-majeerteen Lagu Xasuuqay Iyo Sida Uu U Dhacay :-
Banka dagaari maleeshiyada ay beesha Habar-majeereen soo dhoobeen, waxay ka koobnaayeen beelaha harti oo dhan. Nasiib wanaag beesha harti waa beel tan iyo 1990-kii la cayrsanayey, oo inay halaag la kulmaan mooyaane aan marna wax guul ah indhaha saarin oo bayr yeeshay, aadna u niyad jabsan. Niman kaas horay dhowrka jeer dagaalka loogugu jebiyey taloxumadooda meel ban ah ayey inta dhufeysyo ka qoteen bay shafka dhulka dhigeen. Maalintii la weeraray maleeshiyada beesha Habar-majeerteen iyo midiidinkooda ee ay taariikhdu ahayd (03/12/2015) waxa la weeraray wakhtigii ugu haboonaa in la weeraro, ciidan baqaya oo meel ban ah dhufeysyo ka qotay. Maleeshiyada beesha Habar-majeerteen waxaa la weeraray waaga oo aan weli beryin marka geed iyo ruux aan la kala garan. Waxaana laga weeraray labo jaho oo kala duwan.
Sida ay ku warameen ciidamadii dagaalka lagu jebiyey ee beesha Habar-majeerteen firxadkoodii, subaxdii la weeraray oo xabadda lagu bilaabay waxay sheegeen in jaho kasta ay xabaddu uga soodhacday. Taasoo loofasiray inay waayeen jaho ay u cararaan. Arintaasi waxay sababtay in dagaalku uu wakhti dheer qaato oo xabaddu ay socoto ilaa iyo 6 saacadood. Dagaalku markii uu socdey mudo 6 saac ah ayaa ciidanka beesha (Sacad) waxay qabsadeen fariisimadii iyo kaydkii maleeshiyada Habar-majeerteen. Beesha Habar-majeerteenna waxaa u suurogalay inay ciidankooda xoogiisii iyo hubkii ay wateen ay la baxsadaan. Walow jab xoog leh loo geystey, oo 36 nin laga diley rag 50 meeyo ka badanna laga dhaawacay. Qasaaraha kale ee maleeshiyada Habar-majeerteen loo geystey waxaa ka mid ah 7 tigniko ah oo laga gubey iyo kaydkii saanadda iyo sahay waxay haysteen oo dhan oo laga qabsaday.
Waxaa kaloo xusid mudan, in maalintii weerarka laguqaaday maleeshiyada Habar-majeerteen oo la jebiyey fariisinta maleeshiyadoodana laga qabsaday. Maalintii ka horeysey in maalintaas heshiiskii xeeladda ahaa ee lagu qatalay ay odayaasha Habar-majeerteen aad ugu farxeen una soo dhaweeyeen. Iyaga oo aaminsan maadaama maleeshiyadoodu aysan ahayn rag shacabkooda difaacikara, xalka keliya ee u suurogelinkara in shacabkoodu magaalada gaalkacyo ay ku soo noqdaan, ay tahay inay si kal iyo laab ah u soo dhaweeyaan nabadda loogu baaqay. Marka si ay dareenkooda ugu muujiyaan wixii dhago leh, waxay maalintii oo dhan ay warbaahinta ka lahaayen oo ay isku xiiqinayeen nabad baanu u baahanahay iyo heshiika waa anu soo dhaweyneynaa.
Sidaad ogsoontihiin badankiinu magaalada (Addis ababa), (Nairobi) iyo (Jigjiga) waxaa mudo dheer daadsanaa curyaamiinta maleeshiyada beesha Harti oo lagu naafeeyey dagaalada isdabajooga ah ee ka socda gobalka Mudug. Maantana maxaysatada beesha harti ee lagu xasuuqay dagaalkii ka dhacay banka Dagaari wixii ka haray, iyaga oo futada ku xamaaranaya oo il iyo goon’la waxaa lagu xooray oo ay daadsanyihiin magaalada Xamar. Sababta oo ah gunta Habar-majeeteen sidii hadba loo xasuuqahayey dhaawacooda markii ay waayeen meel la kala dhigo. Ayey waxay bilaabeen sanooyinkaan danbe inay iska masaafuriyaan dhaawacooda oo sidii qashinkii ay iska fogeeyaan.
Marka ku raaxaysta sida dagaalyahaniinta geesiyiinta ah ee beesha (Sacad) ay u xasuuqeen maxaysatada gunta habar-majeerteen iyo adoomadooda. Bal ila daawada oo ku maadeysta curyaamiinta fufada ku xamaaranaya ee gunta Habar-majeerteen ay Xamar ku qubtay. Bal daya doqontii calooshooda u shaqaysteyaasha ahaa ee ay naagaha Habar-majeereen ay xabada isagaga dhigijireen waxa calaacal iyo shalay nacasnimo ah afkooda ka deganaya, iyaga oo la curyaanshey oo futada ku xamaaranaya oo leh waa nala xooray. Ilayn maasha la yiri “Doqoni Dibir Kama Dheregto”